သင် သတိမထားမိနိုင်သော သင့်အနားက စိတ်ဝင်စားစရာ ဒီအရာလေးတွေ သင်သိရင် မျက်လုံးပြူးသွားမယ် - Tameelay
သင့်သတိမထားမိနိုင်သော နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များ
နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဂျင်းဘောင်ဘီရဲ့ အိပ်သေးသေးလေးတွေအကြောင်းနဲ့ စပါကတီဇွန်းတွေမှာ အပေါက်လေးတွေပါဝင်နေရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပီးနောက်မှာတော့ အခြားကျန်ရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေထဲက တချို့တ၀က်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။
၁။ Pen Lids
သင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြဘောလ်ပင် အဖုံးလေးတွေမှာ သင်တွေ့မြင်နေကြအရာလေးရှိတယ်။ တချို့ကစဉ်းစားနေချိန်နဲ့ တခြားအချိန်တွေမှာ ဘောလ်ပင်အဖုံးကို ကိုက်တတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့် အမေရိကားမှာ နှစ်စဉ်လူ ၁၀၀ထက်မနည်း သေဆုံးနေရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အမှတ်မထင်မျိုချမိလို့ပါတဲ့။ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ ဘောလ်ပင်အဖုံးလေးတွေရဲ့ထိပ်မှာ အပေါက်လေးတွေကို တွေ့လာရပီး သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အမှတ်မထင်မျိုချမိပါက အသက်ရှုမရတဲ့အခြေအနေကို အနည်းနဲ့အများအထောက်အကူဖြစ်အောင်ပါတဲ့။
၂။ Traffic Lights
သင်မီးပွိုင့်က မီးလုံးအရောင်လေးတွေနဲ့တော့ ရင်းနှီးနေမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထိုအရောင်တွေဘယ်က အစပြုခဲ့သလဲ??? မီးပွိုင့်တွေကို ကားလမ်းတွေပေါ်မှာအသုံးမပြုခင် မီးရထားလမ်းတွေမှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တုန်းက အရောင်တွေကနည်းနည်းကွဲပြားပါတယ်။ အနီက အန္တရယ် အစိမ်းက အခြေအနေကိုလေ့လာ အဖြူက သွား ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘာချို့ယွင်းချက်ရှိလာလဲဆိုတော့ မီးပွိုင့်ပျက်နေချိန်မှာ သုံးခုလုံးအဖြူလို့ ထင်ရောင်ထင်များဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ထိုချို့ယွင်းမှုကြောင့် မတော်တဆမှုတွေလည်း်များစွာ ကြုံခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ အဲ့နောက်ပိုငိးမှာတော့ အစိမ်းဟာ သွား အ၀ါဟာ အခြေအနေလေ့လာ အနီဟာ ရပ်ဆိုပီး ပြောင်းလဲလာကာ ကားလမ်းမတွေပေါ်မှာပါ သုံးစွဲလာကြတာပါတဲ့။
၃။ Tic-Tac Lids
သင့်နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အထူးသဖြင့် ကြက်သွန်ဖြူကြောင့် ထွက်တဲ့အနံ့ဆိုးကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ပီကေပါ။ တချို့ပီကေဗူးတွေရဲ့ အဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်ပါက ဘဲဥပုံ အခွက်လေးတွေ အဖုံးရဲ့အတွင်းဘက်မှာ ပါဝင်နေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ထို Tic-Tac Lids လေးတွေဟာ သင်ပီကေကို ထုတ်ယူစဉ်မှာ တစ်ခုချင်းဆီအလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်အောင် ရိုးရှင်းစွာဖန်တီးထားတာပါတဲ့။
၄။ Keyboard Bumps
သင်ကီးဘုတ်အသုံးပြုဘူးသူဖြစ်ပါက “F” နဲ့ “J” နေရာက အဖုလေးတွေရဲ့ function ကိုသိထားပီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မသိသေးသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပီး ပြောပြပါရစေ။ တချို့ က ဒါဟာ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်လား မျက်မမြင်တွေအတွက်လားစသည်ဖြင့် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာသင်တို့ သိထားသလိုပဲ Typing အတွက် မှန်ကန်တဲ့ လက်အနေအထားအတွက်ပါပဲတဲ့။
နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြ သော့ခလောက်တွေရဲ့ အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြရစေ။ သော့တွေဟာ သင့်နေ့စဉ်ဘ၀မှာ သင့်ကို လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့အရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမှာပါဝင်တဲ့ အရာလေးရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သော့ထည့်တဲ့အပေါက်ဘေးက အပေါက်ငယ်လေးတွေပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ရေနဲ့အခြားသော သော့အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းတွေကို သံချေးတက်စေတဲ့အရည်တွေရဲ့ ထွက်ပေါက်တစ်ခုပါပဲတဲ့။
၆။ Toothpaste Tubes
သင်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးဘူး အစွန်းက အရောင်အမှတ်အသားလေးတွေကို သတိထားမိပါသလား။ တချို့ကဒါတွေဟာ သွားတိုက်ဆေးမှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပီးတည်ရှိနေတာလို့ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့လောက်မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ထိုအမှတ်အသားလေးတွေဟာ ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာ ရှိတဲ့ အလိုအလျောက် ထုတ်ပိုးတဲ့ စက်တွေအတွက် အမှတ်အသားတစ်ခုပါ။ ထိုအမှတ်အသားလေးကို သွားတိုက်ဆေးကို ဗူးထဲထည့်သွင်းပီးချိန်မှာ ပြုလုပ်လိုက်ပီး ထုတ်ပိုးတဲ့စက်က ထိုအမှတ်လေးကို scan ဖတ်နိုင်မှ စတင်ထုတ်ပိုးပါတော့တယ်။
၇။ Wine Bottles
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ၀ိုင်ပုလင်းတွေဖက် သွားကြည့်ရအောင်။ ၀ိုင်ပုလင်းတွေဖင်မှာ အချိုင့်ပုံရှိနေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒါကို “Punt” လို့ခေါ်ပီး စတင်တီထွင်ချိန်မှာတော့ ၀ိုင်ပုလင်းတွေကို အလွယ်တကူမလဲစေဘဲ stable ဖြစ်နေအောင်ပါ။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ပုလင်းတော်တော်များများမှာအသုံးပြလာကြပီး ဂက်စ်ပါတဲ့ပုလင်းတွေအတွက်ကတော့ ဒါဟာ ပုလင်းထဲက ဖိအားကို ညီမျှစေပါတယ်တဲ့။
၈။ STOP Signs
STOP signs မှာ ဘာလို့ ထောင့်ရှစ်ထောင့်ကို အကြမ်းဖျင်းအသုံးပြုကြတာလ?? တကယ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက လူတွေဟာ STOP Signs ကို ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ထောင့်ပေါ်မူတည်ပီး အန္တရယ်အမျိုးအစားကို ခွဲခြားကြတာပါတဲ့။ အများအားဖြင့် မီးရထားလမ်း Signs တွေမှာ အ၀ိုင်းပုံတွေ့ရတတ်ပီး ဒါဟာ အန္တရယ်အရှိဆုံးလို့မှတ်ယူခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တော်တော်များများလမ်းဆုံလမ်းခွနေရာတွေမှာ ထောင့်ရှစ်ထောင့်ပါ STOP Signs တွေကိုပဲ ယေဘုယျအသုံးပြုကြပါတော့တယ်တဲ့။
၉။ Men and Women Buttons
ခုခေတ်မှာတော့ မိန်းခလေးနဲ့ ယောက်ျားလေး အကျီင်္တွေ ဘောင်းဘီတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ကြယ်သီးအနေအထားဟာ သိပ်မထင်ရှားတော့ပါဘူး။ ရှေးတုန်းကတော့ ဒါဟာ ကွဲပြားမှုတကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားဝတ် အ၀တ်အစားတွေရဲ့ ညာဘက်ပိုင်းမှာ ကြယ်သီးကို တပ်ဆင်ကြပီး မိန်းခလေးအတွက်ကတော့ ပြောင်းပြန်ပေါ့။ အကြောင်းကတော့ ရှေးခေတ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်မိန်းခလေးတွေဟာ အစေခံတွေရဲ့ အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်ပေးခြင်းကိုသာ လက်ခံပီး ညာသန်အစေခံတွေ အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်ပေးရာမှာ အဆင်ပြေစေဖို့ပါတဲ့။ ယောက်ျားလေးအများစုကတော့ ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်ကြတဲ့အတွက် ပြောင်းပြန်အနေအထားမှာရှိနေတာပါတဲ့။
Writer- စပွန့် (Daily Hot News)
အသားအရေ ချောမွတ်အောင် အာလူးရေခဲတုံး သုံးကြမယ်
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အရေပြား ဟာလည်း အိုမင်းလာပြီး နုပျိုတောက်ပတဲ့ အရောင်အဆင်းတွေ လျော့ကျလာမှာ ထုံးစံပါပဲ။ နောက်ပြီး နေလောင်ဒဏ် နဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်း အရေပြား ဟာ မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရင်လိုနုပျိုတောက်ပတဲ့ အရေပြား လေးကို ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် ပိုက်ဆံ အများကြီး အကုန်ကျခံစရာမလိုပါဘူး။ မီးဖိုချောင် ထဲမှာ အလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့ …
ဇိမ်ခံဟိုတယ်ဖြစ်လာတဲ့ စွန့်ပစ်ခံလေယာဉ်ကြီး ဘိုးရင်း ၇၂၇လေယာဉ်ကြီးဟာ သက်တမ်းပြည့်သွားတဲ့အတွက် ကော်စကာရီကာလေကြောင်းလိုင်းကနေ အနားပေးခဲ့ပါတယ်။ တောထဲမှာ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ လေယာဉ်ကြီးကို သူဌေးကြီး Allan Templeton က ပြန်လည်ရယူခဲ့ပြီး ကမ်းခြေကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ စွန့််ပစ်လေယာဉ်ကြီးကို ဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်က ဒေါ်လာ ၅သိန်း …
ကြက်ဥ ဘဲဥ တွေကို ဒီလို စားကြည့်ကြမယ်..။
ကြက်ဥ နှင့် ဘဲဥများကို ပြုတ်မစားချင်လို့ ဖုတ်စားချင်ရင်တော့ ကျွန်တော် နည်းလမ်းပြောပြပါ့မယ်။ မိမိခြံဝန်းထဲက အသုံးမဝင်သည့် ငှက်ပျောတစ်ပင်ကို ခုတ်လှဲပြီး ၄င်းငှက်ပျောပင်ကို ပိုင်းဖြတ်၍ ပုံပါအတိုင်း ကြက်ဥတစ်နေရာစာ ဓားဖြင့်ကွင်းဖောက်ပါ။ ကွင်းဖောက်ပြီးပါက ၄င်းနေရာ၌ ကြက်ဥများအစီတန်းထည့်ပါ။ ကြက်ဥများထည့်ထားသော ငှက်ပျောတုံးကို မီးဖို၍ ဖုတ်ပါ။ …